i-lever eyodwa yokugezela ompompi obhulashiwe i-nickel
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 18 izilinganiso ikhasimende
(18 Izibuyekezo ikhasimende)
SKU: 2321501 Categories: Amanzi okugeza, Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa Tags: 1 Bamba, 1 Imbobo, isikulufu sokugeza
I-Faucet enhle kakhulu, i-Superve Quality nokufakwa kwe-esy
Lo mkhiqizo wawubukeka ngendlela ehlukile ngaphezu kokuba yisibambo esisodwa, yingakho ngathenga. Ngeneliseke kakhulu ngekhwalithi nokuqedwa komkhiqizo futhi ngiyajabula ngokuthenga kwami.
Ngithenge lokhu ukuze ngithathe indawo yompompi ombhobho o-2 osukhona, endlini yami yokugezela. Yize imbobo emaphakathi kokuyize yayincane kakhulu futhi yayidinga ukukhishwa ukuze kufakwe le ompompi entsha, ipuleti lobuso elifakwe naleli ompompi lamboza izimbobo ezi-3.
Le ompompi isebenzisa izinsimbi ezisezingeni eliphakeme, insimbi engagqwali yanamuhla nokufakwa ngethusi. Ukufakwa okuphakathi nendawo kunendandatho yethusi ukuvikela ompompi kokuyize nezikulufo ezi-2 ngapha nangapha kwendandatho ukuqinisekisa ukuqina. Lokhu kubukeka kuyindlela ompompi abathandekayo abafaka ngayo kulezi zinsuku, engikuthokozelayo uma ngibheka ukuthi kunzima kanjani ukuthola i-torque efanele ezikhaleni eziqinile ngaphandle kwezikulufo ezi-2.
Ucezu lokukhipha amanzi aluhambi ncamashi echibini lami, kepha ngithanda ukuthi kuyisijula ​​sokucindezela ukuvala kunokuba nebha oyidonsayo. Umehluko wedreyini emnyama nosinki omhlophe muhle. Abanye abantu bangahle bakhathazeke ngokuthi idreyini iyipulasitiki, ngakho-ke kufanele uqaphele. Kuzofanele ngibone ukuthi ime kanjani ngokuhamba kwesikhathi.
Kuyaqapheleka ukuthi ngenze lolu hlobo lwamapayipi alula ngaphambilini. Ngiyi-DIY'er ephathekayo, kepha angisiye osebenza ngamapayipi onolwazi. Amathuluzi nezinto engizisebenzisile zifaka phakathi isihlanganisi, izingidi zesiteshi, i-screwdriver, ibhakede, ithawula, ama-plumbers putty, i-teflon tape, ithuluzi le-Rigid EZ Change faucet (kanye ne-1 1/2 ″ hole saw + drill ukuguqula ize).
Ngihlatshwe umxhwele yile mpompi. Yakhiwe kahle, inzima, ibukeka yinhle kakhulu futhi isebenza kahle kakhulu. Ukufakwa kwakuwumoya ohelezayo, kepha imigqa yokuhlinzeka yayifushane kancane. Azikho izinkinga. Umkhiqizi waze wanikeza iteyipu yeTeflon. Ukuphela kwento engifisa ukuthi lokhu kube nakho kwakuwuhlobo oluthile lwesikhala sepulasitiki ngaphansi kwepuleti elikhulayo ukuze likwazi ukuqiniswa kancane. Nginesiqiniseko sokuthi ngikwazi ukwenza okuthile. Sekukonke, lokhu kungukuhamba okukodwa kompompi.
Njengoba abanye besho, ukuqinisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kunesifiso sokugoba ipuleti lomkhumbi. Isixazululo sami kulokhu bekuwukusebenzisa ama-o-rings azungeze umkhono ocijile odluliswa ngamapayipi. Amasongo ama-o kufanele abe makhulu ngokwanele ukulingana azungeze lowo mkhono kodwa abe mancane ngokwanele ukuthi angangena epuletini ledeski. Ngibeke okumbalwa kwalokhu ukuze ukuphakama kwesitaki kube mude kancane kunokuphakama kwepuleti ledeski. Ama-o-rings anebhonasi eyengeziwe ngoba isiza ukufaka ipayipi nompetha wepuleti. Ngale ndlela, ngikwazile ukuqinisa ompompi phansi ukuze ungahambi futhi ipuleti lingakhothami.
Ngithandana ngokuphelele nale mpompi. Imigqa enhle futhi elula iyamangalisa. Yenziwe kahle, ayishibhile nganoma iyiphi indlela. Zonke izingxenye zibonakala kalula futhi kwakulula kakhulu ukuzifaka. Angiyena umuntu osebenza ngamapayipi futhi nginolwazi oluncane, ngithanda nje ukuzama izinto ezintsha futhi ngikwazile ukukuhlanganisa lokhu futhi ngakusebenza kungakapheli ihora.
Ukugeleza kucishe kube laminar futhi kungakhipha ithani lamanzi uma ukuvumela.
Ngijabule kakhulu ukuba nalokhu ekugezeni kwethu kwezivakashi futhi sengivele ngithole izincomo!
Kuyinani elingakholeki. Ngiqhathanise amanye ompompi asakaza izikhathi ezi-2 noma ezi-3 kakhulu futhi awaqhathanisi. Le nto iyisixhumi esiqinile sensimbi! Ukuzizwa kuyikhwalithi emsulwa. Ngingumfana ongashadile ophakathi nendawo. Akufanele ngijabule ngalokhu ngendawo yokugezela kodwa ngiyayithanda!
Ngikufake lokhu endlini yokugezela endala engama-60 esinezinto zokuqala. Kwakufanele ngikhulise umgodi ophakathi nendawo ngokuwugaya. Bekufanele ngenze okufanayo nangokukhipha amanzi. Angisebenzisanga idreyini eza nayo, ngathenga umsebenzi oqinile wokuqhuma kwensimbi. Lokhu kuguqule indlu yami yokugezela futhi kwanikeza umuzwa ophakeme ngokwengeziwe, noma ngabe kuwukugeza nje izandla zami, ebesizenza sonke kamuva nje.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu singekhwalithi ephezulu kakhulu futhi idizayini yinhle kakhulu ngentengo. Isiphetho se-nickel sinokubukeka okuhle kwe-satin futhi kulula ukukugcina kuhlanzekile futhi kungabi namabala. Ukulawulwa kwesandla okulula kulula futhi kuyinkimbinkimbi ukuyisebenzisa. Iza nepuleti lekhava uma lidingeka ukuguqula lisuke emigodini emithathu liye kwelinye, kepha ngiyikhombe ngqo ngaphandle kwepuleti engaphezulu kwekhanda lami elilodwa lomgodi. Bekulula ukuyifaka, kepha qaphela ukuthi imigqa yokuphakelayo icishe ibe yizinyawo kuphela futhi ungadinga izandiso zomugqa wamanzi ezengeziwe ukufinyelela kuma-valve akho wokufaka. Lo ngumkhiqizo omuhle nenani elikhulu lentengo.
Kuyamangalisa ngempela! U-plumber wethu ubuze ukuthi siyithathephi le ompompi ngoba ibiyikhwalithi enhle kakhulu futhi ubefuna ukuyithola ngokwakhe. Ngingancoma kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, kuhle kakhulu.
Ngeneliseke kakhulu ngompompi! Idizayini ilula futhi yinhle, okwenza indlu yami yokugezela ibukeke mihle! Inzuzo enkulu ukuthi ukufakwa kulula kakhulu! Uma ngikhuluma iqiniso, ngicabanga ukuthi kuzothatha isikhathi ukuyifaka, kepha imiyalo icacile futhi kulula ukuyiqonda. Ngigcwele ukuncoma ngokuvela kwale ompompi. Bengijwayele ukuba nompompi ojwayelekile waseMelika endlini yangasese yangaphezulu, kepha bekungabukeki kahle impela. Ngiyakuthanda ukuvela kwale ompompi, futhi ngiyathanda ukwelashwa kwendawo!
10 kwayishumi! Uthenge OKUTHATHU futhi ubathande ngokuphelele! Ikhwalithi enhle kakhulu futhi intengo yokweba.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kuyinto ejiyile kancane noma esindayo kunalokho ebengingathanda!
Ngiyasithanda isitayela nendlela ompompi osebenza ngayo, impahla enhle. Kuhle kakhulu
Umpompi wokuqala wokugezela engake ngawuthenga! Kuyamangalisa! Kwenziwe kahle futhi kwaqina! USleek nesitobha esinkini kuhle. Ngikholelwa ngokuphelele!
Nginesiteshi sokuhlola esenzelwe ukubuyekeza ompompi.
Ngizozama ukudiliza izinto ngokusemandleni ami ngekhwalithi yomkhiqizo nobunzima bokufakwa.
Esikalini se-1-10, ngingasho ukuthi le ompompi ingu-7/10 ngokuya ngobunzima bokufaka.
Gcina wazi ukuthi kungahluka ngendlela usinki wakho nekhabethe lakheke ngayo.
Le ompompi ethile iyikhwalithi enhle.
Ukuphela okumnyama kubukeka kukuhle. Sekukonke le ompompi ibonakala iqinile kakhulu. Ngithanda ukuthi isiphetho asibi namabala amaningi ngenxa yokubukeka kwe-matte. Akudingi ukusulwa phansi ngezikhathi ezithile njenge-chrome ukugcina ukukhanya.
Isibambo esisodwa senza kube lula ukukhetha ukushisa kwamanzi. I-valve yokuxuba isebenza kahle, njengoba kufanele.
Le ompompi kulula ukuyisebenzisa futhi ihamba kahle ngaphandle kwezinkinga.
Iqiniso lokuthi ukujikeleza kwe-360 degree kuyahambisana kuyinhlanganisela ngoba ungakwazi ukuyifaka noma ngabe ufuna kanjani futhi isazohamba lapho ufuna khona. Futhi kuza nepuleti lephemi. Ungamboza lezo zimbobo ezingasetshenziswanga kusinki wakho.
Unekhono lokwehlisa ikhanda, ngokuqinisekile okuhlanganayo futhi. Izindlela zokufafaza eziningi ezingafani nezinye ukudonsa phansi ompompi. Isisekelo lapho ikhanda liphuma khona sakhiwe kahle ukuze singonakalisi ipayipi ngokuhamba kwesikhathi njengoba ulisebenzisa.
Idizayini enhle kanye nokulingana nokuqedela kwenza lokhu kube ompompi abahle kakhulu. Kunzima ukukusho ngezithombe kodwa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sinomklamo oyingqayizivele ofaka ukujija okuncane ku-spout, okwenza kube yinto yobuciko. Kuyinto esindayo ukwakhiwa okuqinile. Isibambo esisethiwe empeleni siyamangalisa futhi. Kuqonde phambili Ukufakwa okulula kuza ngisho namagilavu. Angikwazi ukubuyisela ngokwanele!
Ukufakwa kulula ngazo zonke izesekeli futhi okuhlinzekwayo, izinto ezibonakalayo zakhiwe kahle futhi zisezingeni elihle. Leli payipi nezixhumi ezinikeziwe zithathe indawo yepayipi lami elidala ngokungenaphutha. Ukugeleza kwamanzi ngokushelela nokuphendula kahle ngesiphathi esisodwa nangomsindo omncane futhi akunamphumela wokuqhakaza njengompompi wami wakudala. Idizayini yinhle futhi yenza indlu yami yokugezela endala ibukeke yintsha futhi yesimanje. Okuwukuphela kwento esilelayo ayizi nolungiselelo lwe-pop-up drain futhi kufanele ngikubeke ngesandla ngomdlalo wami wakudala. Kukonke, ikhwalithi enhle nokubukeka okuhle futhi kufanele kuhlale iminyaka eminingi, ngizobuyekeza futhi ngokuzayo uma kuvela inkinga.
Lona umpompi ombi omuhle kunayo yonke engiwubonile. Inesitayela esiningi futhi inzima kakhulu. Yenziwe kahle kakhulu futhi isebenza kahle kakhulu. Kwaba ukufaka okulula. Ungakuncoma lokhu kunoma ngubani ofuna ompompi oqinile, wanamuhla.
Ngikuthengile lokhu ukuze ngithuthukise ompompi wami wasendlini yokugezela obuthola usuku. Bengikhathazekile ngezinga lobunzima ngokufaka ompompi omusha. Noma kunjalo, iphakethe lafika nencwajana yokuthi ungayifaka kanjani. Ingxenye enzima ukuyifaka kabusha ngamapayipi ami akhona endlini yami yokugezela. Kepha bekungekubi kakhulu ukuthola. Yize isikhathi sokufaka singaphezu kwe-1hr kimi njengoba ngingakaze ngenze noma yimuphi umsebenzi wokufaka amapayipi ngaphambili. Ngangijabule kakhulu ukuthi yafika nepuleti lesisekelo njengoba umpompi wami wamanje wawunezimbobo ezi-3 ezigxunyekwe phezulu kwami ​​kwegranite ngakho-ke ngikwazile ukusebenzisa ipuleti ukumboza izimbobo ezi-2 ezingadingi lempompi. Futhi ukuba nesethi yesibili yezandla kuzosiza kakhulu yize ngakufaka ngedwa kepha lokho kukhuphule izinga lobunzima.
Engangikusebenzisa kwakuyisifudumezi esingu-11mm ukubopha ipayipi lompompi endlini yamapayipi amanzi (ulayini oshisayo nobandayo), umshayeli wesikulufu ukubopha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ku-granite ngaphansi kanye nocingo ukushintsha ikepisi yokukhipha amanzi
Iphakethe lafika namagilavu ​​ukuvikela ama-smears kuyo yonke iminwe kodwa angizange ngilisebenzise.
Kuze kube manje, bengilokhu ngiyisebenzisa futhi wonke umuntu endlini uthanda indlela umpompi omusha obukeka ngayo. Ngokuqinisekile ngizobe ngithenga ompompi abaningi kulesi sitolo njengoba ngibheke ukuthuthukisa amanye ompompi endlini.
Kubukeka kukuhle. Kukhulu kakhulu endlini encane yokugezela. Amamitha wokunambitha.
Ukuvuselelwa okuhle kakhulu kusinki yami yokugezela. Ikhwalithi enhle.